Dị Ọdịnaya nke entdị Ọdịnaya Na B2B Social Media Marketing | Martech Zone
Kedu ụdị ọdịnaya a na-akwalite na mgbasa ozi mmekọrịta na-enye mmetụta dị ukwuu? O nwere ike iju gị anya. Buru n'uche na ndepụta a nke ụdị ọdịnaya abụghị ihe na - arụ ọrụ kacha mma - naanị nzaghachi nke ndị na - azụ B2B na ọdịnaya nwere mmetụta dị ukwuu mgbe ha lechara ya mgbe ejiri mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Site na mbu, lee ndepụta nke ụdị ọdịnaya kachasị emetụta yana nkọwa sitere na Eccolo Media:
ikpe Studies - nkọwa zuru ezu banyere otu ndị ahịa si ebugharị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị na-ere ahịa.
Ntuziaka Teknụzụ zuru ezu - nkowa miri emi banyere njirimara ngwaahịa na arụmọrụ, ma ọ bụ ntuziaka nzọụkwụ site na ntinye maka ntinye teknụzụ.
White akwụkwọ - nyocha nke teknụzụ ma ọ bụ nsogbu azụmahịa na ọnọdụ sitere na nnwere onwe dị ukwuu, ndị na-ere ahịa na-anọpụ iche
Podcasts - ndekọ ederede nke akaebe ndị ahịa ma ọ bụ mkparịta ụka na ndị ọkachamara n'okwu a nwere ike isi na saịtị Weebụ ma ọ bụ budata na desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka
blog Posts - nkenke ntanetị dị mkpirikpi nke na-emeso isiokwu ndị dị ugbu a na ụdị ọhụụ, na ebumnuche nke itinye ndị ahịa na atụmanya aka.
Infographics - ihe nlere anya nke data na usoro, na ebumnuche nke ịkọwa ihe ọmụma dị mgbagwoju anya.
Videos - ejiri maka ọtụtụ nkwukọrịta ahịa, site na akaebe ndị ahịa gaa na ngosipụta ngwaahịa na ajụjụ ọnụ ndị isi.
Broshọ - ozi, ọrụ, ma ọ bụ ndị na-ere ozi.
Akwụkwọ Akụkọ - akwụkwọ akụkọ ọdịnala na usoro ntanetị ma na-egosipụta nchịkọta ngwa ngwa ngwa ngwa na njikọ nke ọgwụgwọ ogologo.
eBooks - akwụkwọ ederede ogologo oge emere iji mejupụta ya na ntanetị, na-eweta ozi na ụzọ na-akpali akpali na mmekọrịta mmekọrịta.
webinars - nzukọ ọmụmụ ihe ntanetị nke na-ewepụta ihe ngosi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọhụụ ma ọ dị ndụ ma ọ bụ na usoro edepụtara, na usoro chọrọ.
Mpempe akwụkwọ na-ere asọmpi - tulee njirimara ngwaahịa na ọrụ sitere na ọtụtụ ndị na-ere ahịa.
Ahịa Magazin - na mbipụta na ntanetị, nyefee akụkọ ụlọ ọrụ ma chọpụta isi okwu na ọnọdụ.
Ihe ngosi mmịfe weebụ - ihe ngosi ntanetị nke na-ekpuchi nkọwa ngwaahịa ma ọ bụ isi ọnọdụ, nke a na-emesi ike na eserese na onyonyo.
Na olu atọ nke Eccolo Media 2015 B2B Teknụzụ Ọdịnaya Nyocha, anyị jụrụ ndị na-azụ ahịa teknụzụ, site na ndị injinia na c-suite, ka ha gwa anyị ụdị ọdịnaya ha na-eri site na ọwa mmekọrịta mgbe ha zụrụ teknụzụ.
Agencylọ ọrụ anyị ewepụtala usoro akọ na uche anyị na-akpọ ụlọ ikike ọdịnaya maka ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ihe ndị a dị n'elu na-ekwu maka ihe kacha emetụta na nzụta ịzụta, buru n'uche na ị ga - eji ụfọdụ usoro nwere ike ịmetụta ndị na - azụ ahịa n'ime. duru mmadụ ịrịọ maka ọmụmụ ihe.
Ọ dịghị mfe dịka otu ụdị ọdịnaya karịa nke ọzọ, ọ bụ otu ha si arụkọ ọrụ ọnụ na atụmatụ mgbasa ozi. Lee ụfọdụ ozi ndị ọzọ enyere na infographic a site na Eccolo Media, Kedu ụdị ọdịnaya mmekọrịta mmadụ na nwanyị nwere mmekọahụ?
Tags: faịlụ ọdịyoisiokwu blogblog postsBlọọgụikpe ọmụmụndoro-ndoro ahia na-ere akwukwoikike ọdịnayaụdị ọdịnayamagazin ndị ahịantuziaka teknụzụ zuru ezudiggesederedeemail Marketingozi ịntanetịVidio AhịaWebinar Ahịamultimediaakwụkwọ akụkọPodcastsakụkọ ọmaihe ngosi mmịfe weebụakwụkwọ ọchawhitepapers